युरोप छिर्ने इलिगल ट्रान्जिट टर्कीमा नेपालीको बिजोग, “रिस्की गेम”मा फस्दै युवा
युरोप छिराउने बाहनामा विभिन्न दलालहरुले नेपाली युवाहरुसँग मोटो रकम लिएर टर्की छिराउने र बिचल्ली पार्ने गरेका समाचारहरु धेरै अगाडी देखि नै हामीले पढ्दै आएका छौ । नेपाली युवाहरुलाई मोटो रकम लिएर नेपाली दलालहरुले टर्कीसम्म ल्याउने गरेका छन् । त्यहाँ ल्याएर टर्कीको कार्ड बनाइदिने र युरोपियन मुलुकमा छिराउने सपना देखाएर धेरै युवाहरुलाई फसाइएको छ । ठुलो खतरा मोलेर इलिगल बाटोबाट केही युरोप छिरेका पनि छन् । भने धेरै नेपाली अहिले पनि टर्कीमै फसिरहेका छन् ।
हालै टर्कीमा फसेका र दलालले पैसा र पासपोर्ट नदिएर अलपत्र पारेका नेपाली युवाहरुले पिडकको बिरुद्धमा आवाज उठाउन थालेका छन् । हालै गठन भएको गैरआवासिय नेपाली संघ एनसिसि टर्कीको फेसवुक पेजमा ति युवाहरुले आवाज उठाएपछि अहिले एनआरएनएले पिडितलाई सहयोग गर्ने प्रयास शुरु गरेको बताएको हो । अहिलेसम्म आफुहरुकहाँ २१ नेपालीहरुले आफु पिडित भएको भनेर निवेदन आएका एनसीसी टर्कीका अध्यक्ष उज्वल कुमार घिसिङले बताउनुुभयो । ति पिडितहरुले दीपक बास्कोटा र कमला पौडेलले पिडित बनाएको भनेर नामै तोकेर निवेदन दिएको र यसबारेमा आफुहरु सत्यतथ्य पत्ता लगाउने प्रयास गरिरहेको उहाँले बताउनुुभयो । यस विषयमा निज बास्कोटासँग सम्पर्क गर्दा विभिन्न वाहना गरेर आफुलाई ढाटिरहेको उहाँले बताउनुुभयो । २१ जनाको निवेदन आए पनि पिडित कति छन र कोको यसमा सम्लग्न छन भन्ने कुरा आफुहरुले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने र दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । तर पिडितहरुले भने निवेदन दिए पनि कसरी आफुहरुले न्याय पाउने भन्ने यकिन नभएकोले एनआरएनलाई निरन्तर दवाव दिइरहेका छन् । युरोप छिराउने भनेर ५\_६ लाख सम्म लिएर आफुहरुलाई अलपत्र पारेर एजेन्ट सम्पर्क बिहिन भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
तस्विर सामाजिक सञ्जालबाट
नेपालीहरुलाई पिडित बनाउने एजेन्टहरु त्यहाँ अरु पनि धेरै छन् । चितवनका सरोज कुमार श्रेष्ठ युराप छिर्ने भनेर टर्की आएको ३ बर्ष भयो । उनी इलिगलबाटो बाट ग्रीस छिर्न खाजे तर सुरक्षाकर्मीले बोर्डरमा समातेर टर्की नै फिर्ता पठायो र जेलमा परे । उनले एजेन्टलाई दिएको साढे ६ लाख र पासपोर्ट नदिएका कारण नेपाल फर्कन चाहेपनि नपाएको बताँउछन् । अहिले उनीजस्ता सयौं नेपाली युवाहरु टर्कीमा इलिगल रुपमा बसिरहेका छन् । उनीहरु युरोप छिर्ने गेम कहिले शुरु हुने हो त्यो पनि थाहा छैन भने आफ्नो पैसा कसरी फिर्ता पाउने भन्ने पनि पत्तो छैन । टर्कीमा ४ हजार नेपाली रहेको एनआरएनए टर्कीका अध्यक्ष घिसिङले बताउनुुभयो । त्यसमा ८० प्रतिसत नेपालीहरु इलिगल रुपमा युरोप छिर्ने सपनामा त्यहाँ पुगेको पिडित श्रेष्ठले बताए ।
टर्कीबाट युरोप छिराउने “रिस्की गेम” के हो ?
टर्कीबाट इलिगल रुपमा युरोप छिराउने कामलाई मानव तस्करी गर्नेहरुले कोड भाषाको रुपमा “गेम” भन्ने गर्छन । मानव तस्करहरुले इलिगलबाटोबाट युरोपियन मुलुकहरुमा छिराउनका लागि विशेषगरी पाकिस्तानी एजेन्टहरुसँग मिलेर नेपाली युवाहरुलाई टर्की ल्याउने गर्छन् । त्यहाँबाट समुद्री बाटो हुँदै सुरक्षाकर्मी छलेर युरोप छिराउने इलिगल कामलाई उनीहरुले “गेम” को नाम दिन्छन । पाकिस्तानीहरुले समुद्रीबाटो र विभिन्न देशहरुमा निजि गाडीबाट इलिगलरुपमा युरोप छिराएको २ हजार युरोसम्म लिने गरेका छन् । त्यसको सेटिङ मिलाउने नेपाली एजेन्ट नै हुन्छन् । युरोप आउनेक्रममा नेपाली नेपालीहरु यो इलिगलबाटो महिनौ लगाएर पुरा गर्छन् । करिब १ वर्ष लगाएर टर्कीबाट बोस्निया, ग्रीस हुँदै अहिले पोर्चुगलमा रहेका एक नेपाली युवाले यसक्रममा धेरै नेपालीहरु विरामी, घाइते र अंगभंग समेत भएको बताउँछन् । एनआरएनए टर्कीका अध्यक्ष घिसिङले टर्की,अमेरिका छिर्नका लागि मेक्सिको जस्तै युरोप छिर्ने ट्रान्जिट पोइन्टको रुपमा लिएर नेपालीलाई ल्याउने र अलपत्र पार्ने काम भैरहेकोले यसमा नेपाल सरकारको पनि ध्यान जान आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले केहीले टर्कीको भिसामै रोक लगाउनुपर्ने माग गरेपनि आफु त्यसमा सहमत नभएको तर मानवतस्करले इलिगलबाटोबाट युरोप छिराउने भन्दै ल्याएर पिडित बनाउने काम बढेकोले यसलाई रोक्न प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले टर्कीबाट युराप छिर्न सजिलो नभएकोले यहाँ आउन चाहने नेपालीलाई राम्रोसँग बुझेर मात्रै आउन आग्रह गर्नु भएको छ ।
चर्चित मास्टर सेफ सन्तोष साह नेपालमा के गर्दैछन् ?
पुर्नस्थापित संसदको पहिलो बैठक फागुन २३ गते